Turkiga oo sheegay in wadahadal lagu xaliyo muranka Qatar iyo xulufada Sucuudiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldTurkiga oo sheegay in wadahadal lagu xaliyo muranka Qatar iyo xulufada Sucuudiga
June 6, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynah Turkiga Recep Tayyip Erdogan. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
Ankara-(Puntland Mirror) Afhayeenka Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta oo Talaado ah u jeediyay wadahadal iyo wadashaqayn dhexmara dowladdaha khaliijka kadib markii qayb kamid ah ay xiriirka diblomaasiyadeed u jareen dalka Qatar.
Ibrahim Kalin, afhayeenka Erdogan ayaa sheegay in dowladdaha xubnaha ka ah Golaha Iskaashiga Khaliijka kuwaas oo xiriir ganacsi la leh Turkiga, ay murankooda ku xaliyaan wadashaqayn iyo wadahadal, sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu.
Afhayeenka ayaa sheegay in Madaxweyne Erdogan uu bilaabay dadaalo lagu qaboojinayo xiisada.
Erdogan ayaa khadka taleefoonka kula hadlay Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, Amiirka Kuweit Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah iyo Boqorka Sucuudiga Salman bin Abdulaziz Al Saud, sida ay ku warantay Anadolu oo soo xiganaysa ilo-wareedyo katirsan madaxtooyada Turkiga.